Thutasone, Author at Thutasone
သာသနာအတှကျ ခြီးကြူးဂုဏျပွုစရာ ၁၃ ဘှဲ့ရ ဆရာလေး တဈပါးပျေါထှကျလာပါပွီ ပရိသတျကွီးရသောသနာအတှကျ၁၃ဘှဲ့ရဆရာလေးတဈပါးပျေါထှကျလာပါတယျဆရာလေးကတော့ညောငျဦးမွို့နယျ​ခြောငျးရှညျရှာဇာတိဖှားဖွဈပါတယျပုသိမျကွီးခမျြးမွရံသီသီလရှငျစာသငျတိုကျကွီးကဖွဈပွီး(၁၃)ဘှဲ့ရမဓမ်မစာရီသုဘဒ်ဒါလင်ျကာရဖွဈပါတယျ… ဆရာလေးရဲ့တျောပုံထူးခြှနျပုံကသာသနာအတှကျခြီးကြူးဂုဏျပွုစရာဆရာလေးပဲဖွဈပါတယျခုလိုသာသနာအတှကျစာခဆြရာတဈပါးပျေါထှကျလာလို့ဝမျးသာရပါတယျသီလရှငျလေးတှလေညျးအားကလြေးစားကွိုးစားလိုကျကွပါနျော…. Credit unicode version သာသနာအတြက် ခြီးကြူးဂုဏ်ျပုစရာ ၁၃ ဘြဲ့ရ ဆရာလေး တစ္ပါးပေါ်ထြက္လာပါပြီ သာသနာအတြက် ခြီးကြူးဂုဏ်ျပုစရာ ၁၃ ဘြဲ့ရ ဆရာလေး တစ္ပါးပေါ်ထြက္လာပါပြီ ပရိသတ်ကြီးရေသာသနာအတြက်၁၃ဘြဲ့ရဆရာလေးတစ္ပါးပေါ်ထြက္လာပါတယ္ဆရာလေးကေတာ့ညောင်ဦးမြို့နယ်ေ်ခာင်းရြည်ြရာဇာတိဖြာျးဖစ္ပါတယ္ပုသိမ်ကြီးခ်မ်ျးမရံသီသီလရြင္စာသင္တိုက်ကြီးကျဖစ်ပြီး(၁၃)ဘြဲ့ရမဓမ္မစာရီသုဘဒ္ဒါလင်္ကာရျဖစ္ပါတယ်… ဆရာလေးရဲ့တ္ပောုံထူ်းခှန္ပုံကသာသနာအတြက်ခြီးကြူးဂုဏ်ျပုစရာဆရာလေးပျဲဖစ္ပါတယ္ခုလိုသာသနာအတြက္စာခဆြရာတစ္ပါးပေါ်ထြက္လာလို့ဝမ်းသာရပါတယ်သီလရြင်လေးတြေလည်းအားကေလြးစားကြိုးစားလိုက်ကြပါနော်…. […]
မြန်မာပြည်တွင်း မှာ မထင်မရှား ရွက်ပုန်းသီး ပညာရှင် များစွာ ရှိ ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ ယခုတော့ မြက်ဖြတ်စက်ကြီး နဲ့ လေယာဥပျံ တီ ထွင် လိုက်နိုင် ပါပြီ။မြက်ဖြတ်သည့် စက်အင်ဂျင်နဲ့ မြန်မာပြည်က ပထမဆုံး နဲ့ အ ကြီးဆုံး RC လေ […]